Roque Nublo - Umzila obaluleke kakhulu eGran Canaria | Ukuhamba kwe-Absolut
USusana godoy | | Iziqhingi zaseCanary
Lapho sisho URoque NubloKumele futhi sisho iGran Canaria ngoba ingenye yezindawo zokuqala futhi ezivakashelwa kakhulu kuleyo ndawo. Itholakala endaweni eyaziwa ngokuthi iParque del Nublo, iyinika igama layo. Kufanele kushiwo ukuthi ingenye yezindawo ezinkulu kakhulu, kumenyezelwa njengeNdawo Yemvelo ekupheleni kweminyaka yama-80s futhi futhi kungesinye sezimpawu noma izifanekiselo zendawo.
Kokubili lesi sikhala uqobo nezindawo ezisizungezile kusenza sizithole sise- indawo enkulu yezimila kanye nezinhlobo ezibaluleke kakhulu zakwamanye amazwe. Namuhla sithatha uhambo lwale ndawo futhi sikutshela konke okudingayo ukuze ube nohambo olukhetheke kakhulu kuyo.
1 Ungafika kanjani eRoque Nublo
2 Izici zikaRoque Nublo
3 Uzovakasha nini eNublo Rural Park
4 Ukuhamba epaki
5 Amathiphu wokugcina engqondweni ngokuvakasha kwethu
Ungafika kanjani eRoque Nublo
Kusuka eLas Palmas: Kumele siye ngakuTejeda, okungumasipala lapho le ndawo ikhona. Ngemuva kwalokho uzothatha umgwaqo i-GC 150 lapho uzomaka khona lapho ubheke eRoque Nublo. Kuyiqiniso ukuthi yonke into ikhonjiswe kahle, udinga nje ukuthi unake kancane. Kufanele uqaphele ngoba umgwaqo unamajika amaningi.
Kusuka kuMaspalomas: Kulokhu, inkomba okumele uyithathe ibheke kuFataga. Uzodlula eSan Bartolomé de Tirajana futhi uma ususe-Ayacara, uzoba nezinkomba ezifanele ukuze ungaphuthelwa imininingwane yendlela leyo ezoba nemibono nemibono ehlaba umxhwele.
Izici zikaRoque Nublo
Este URoque ukwakheka kwentaba-mlilo, izinsalela ezahlakazeka cishe eminyakeni eyizigidi ezi-3 eyedlule, ekhuphuka ngamamitha angama-80 ukusuka phansi kwayo futhi cishe amamitha ayi-2000 olwandle. Kuthiwa eminyakeni eminingi edlule, bekuyindawo ebekelwe ukukhonza. Kepha namuhla sekungenye yamaphuzu asemqoka ukuvakashelwa, ngoba ingesinye sezimpawu, noma izimpawu zendawo. Ngaphakathi kweziQhingi zeCanary, kubhekwa njengendawo yesithathu ephakeme kakhulu futhi ukuyivakashela, akufani nokulandela indlela yayo ebhalwe kahle futhi ekulungele ukukwamukela.
Indlela yakho izoqala ku- indawo lapho kupaka khona, yize kuyiqiniso ukuthi ikhona eminye imizila, kepha kuyalulekwa ngaso sonke isikhathi ukulandela leyo eshiwo. Njengoba uqhubeka, imibono oyishiya ngemuva iyamangalisa. Ngakho-ke kufanele futhi kushiwo ukuthi kungenye yezinto ezihehayo eziyisisekelo endaweni enjengale. Khumbula ukuthi izinguquko zokushisa nazo zizobaluleka lapho siqhubeka.
Uzovakasha nini eNublo Rural Park
Ezindaweni ezinjengalesi sihlala sinokungabaza ngokuthi kufanele sivakashele nini iNublo ngomoya ophansi. Kepha kuyinkimbinkimbi, ngoba into yokuqala ekuseni ungaba nendawo enhle endaweni yokupaka futhi ngenxa yalokho, umzila ongcono endleleni. Kepha uma uhamba phakathi kwezikhathi zasekuseni, khona-ke uzokuthola kugcwele impela futhi kuyinkinga. Ngakho-ke, abantu abaningi bakhetha ukuhamba ntambama ngakho-ke, ukujabulele ukushona kwelangal, futhi engesinye sezikhathi ezikhethekile ezingatholwa kule ndawo ngenxa yokuhlanganiswa kwemibala okusishiyayo.
Kuqala nge umzila obhalwe uphawu, esesimeni esihle kakhulu sokuhamba okude. kuzo zonke izinyathelo ozohlangana nazo zikaphayini, ezikwamukela kahle. Kancane kancane uzobona ukuthi umgwaqo uhamba kancane kanjani. Ngaphezu kwezihlahla zikaphayini nezihlahla zesikhumba se-chestnut, uzothola izilwane ezahlukahlukene ezinjengezilwane ezihuquzelayo noma izinyoni. Kepha ngemuva kwengxenye yehora, sesivele sesishiya utshani obuluhlaza ngemuva.
Kuleli qophelo lapho amatshe noma amatshe enza ukubonakala kungabonakali ndawo. Konke lokhu kuzonikeza indawo indawo ethambile, ebizwa IPlank yeNublo. Lapho sizobona eyodwa eyaziwa ngokuthi iRoque de la Rana futhi iyona encane kunazo zonke, ukunikeza uRoque Nublo, okuyiyona enkulu kunazo zonke. Zitholakala njengasendaweni esikhumbuza ngendawo eyihlane futhi ngemuva kokubona uhlaza oluningi, kucishe kube yinto engacabangi, kepha kuliqiniso. Ukusuka lapho ungabona futhi iPico de las Nieves, enye yezindawo eziphakeme kakhulu eGran Canaria
Amathiphu wokugcina engqondweni ngokuvakasha kwethu
El isikhathi sokuhamba Kuzothatha cishe ihora, cishe imizuzu engama-50 futhi ngaphandle kokuphuthuma kakhulu, ngakho-ke kungenziwa njalo ngesikhathi esincane.
Kumele kukhunjulwe ukuthi njengoba kukhuphuka, amazinga okushisa azokwehla kakhulu. Lokhu kusho ukuthi kufanele ngaso sonke isikhathi sigqoke izingubo ezifanele nokuthi sifudumele kahle.
Hlala ugqoka izicathulo ezikahle nezifanele kulolu hlobo lwendawo nomzila.
Ubhaka omncane onamanzi nawo uyadingeka ukwenza uhambo luthwaleke kalula.
Kuyinto a umzila olula ukukwenza, awudingi noma yimuphi umkhuba kwezemidlalo ekude nayo. Kepha kuliqiniso ukuthi kungahle kube nesigaba esithile esisheshayo. Ngakho-ke kufanele uqaphele kancane, kepha njengoba sisho, ifanele yonke iminyaka.
Vele, ngenye yezindawo ezibalulekile ongazivakashela. Uma isimo sezulu sikuwe ekuhambeni kwakho, ungajabulela okumnandi imibono ebheke kuTeide. Inketho maphakathi nemvelo ehlala iduduza ukuyithola. Ngabe ufuna ukuyivakashela?
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » URoque Nublo